Soo-saareyaasha & Alaabada Alaabada - Baakadaha Baakadaha
Xadhigga xumbada waa ujeeddo guud oo guud, oo laga sameeyay xumbo polyetylen ah oo la isku riixo. Kuwani ma abuuraan shaabad, waxaana badanaa loo isticmaalaa ka hortagga daadashada.
Foomka Xargaha waa hal-xariiq, qalabka waa EVA, EPE iwm.
On laastikada u gaar ah u dir qandaraasle iyo dekedda konteenarada.
Ku habboon dhammaan noocyada weelka wax lagu xidho, ayaa si isdaba joog ah u isticmaali kara, laakiin saamaynta shaabaddu waa mid guud.
Waxaa loo isticmaali karaa ka dib iyo aluminium-caag ah oo isku dhafan oo xuub isku dhafan iyo saameynta xiritaanka ayaa ka fiican.
Astaamaha ugu muhiimsan ee nadiifka, boodhka, ha u dhuuqin uumiga biyaha, maaha sababtoo ah qoyaan ama heer kulka si loo beddelo xasilloonidiisa.
Hal-xabbad oo kuleylinta kuleylka kuleylka ah oo leh lakabka PE xumbo
Laba-xabbadood oo kuleylinta kuleylka kuleylka ah oo leh lakabka warqadda
Xadhigga xabagta ayaa laga samayn karaa hal xabbo ama laba qaybood iyadoo loo eegayo baahida macaamiisha. Waxaa jira lakab dhejis kulul oo dhalaalaya oo lagu daboolay lakabka dahaadhka ee shaashadda aluminium. Ka dib geedi socodka kuleylka mashiinka qalin-gelinta ama birta korantada, lakabka dhejiska ayaa lagu shaabadeyn doonaa bushimaha weelka. Nooca noocan oo kale ah ayaa loo heli karaa dhammaan noocyada weelka maaddooyinka ah, gaar ahaan weelka dhalada, laakiin saameyntu kama fiicna lakabka xarkaha soo-gelinta.